साग विशेष-२०७६ खेलकुद
निर्वान झापाली, नवराज कुँवर काठमाडौं, १७ मंसिर
गत आइतबार १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को उद्घाटन लायककिलो थियो । दशरथ रंगशाला निकै आकर्षक पारिएको थियो भने तामझाम उस्तै शानदार थियो ।
तर, भव्य उद्घाटन गरिएको सागको व्यवस्थापकीय पक्ष भने निकै उदेकलाग्दो देखिन्छ । तीनपटक मिति सारेर आयोजना गरिएको सागको १३औं संस्करणमा कमजोरी प्रशस्त देखिएका छन् ।
बेलैमा खेलकुद संरचना तयार गर्ने कुरामा सरकार चुकेकै हो तर, साग चलिरहँदा आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि चुकिरहेको छ ।
अत्यन्तै सामान्य कुरामा पनि व्यवस्थापन चुकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
मंगलबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा नेपाल र भुटानबीच पुरुष फुटबल प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो । पहिलो हाःफ सकिएपछि केही दर्शक गेटतिर गएर स्वयंसेवकलाई सोधिरहेका थिए, ‘टिकटको एक हजार रुपैयाँ लिने तर पानी खान बाहिर जानुपर्ने ?’
स्वयंसेवकको जवाफ थियो, ‘छैन त छैन, के गर्नु ?’
त्यसपछि केही दर्शक झन् जंगिए, ‘१०-२० वटा जार ल्याएर राखिदिएको भए के बिग्रन्थ्यो ? उल्टै गैरजिम्मेवार जवाफ दिने ?’
स्वयंसेवकले बाहिर गएर खानुस् भनेपछि ललितपुरका सबिन महर्जन विवाद गर्न थाले ।
‘पैसा एक हजार तिर्नुपर्ने, पानी पिउन बाहिर जानुपर्ने, बाहिर गएपछि छिर्न मुस्किल पर्ने, यस्तो पनि व्यवस्थापन हुन्छ ? तपाईं को हो यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्ने ?,’ महर्जनले प्रश्न गरे ।
उनलाई त्यहाँ उपस्थित करिब ३० जना दर्शकले समर्थन गरे ।
नाराबाजीको स्थिति बनेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई हटायो । उनीहरु दोस्रो हाफ नहेर्ने भन्दै बाहिरिए ।
अपरान्ह ४ बजे महिला भलिबलको फाइनल खेलमा नेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । टिकट किनेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कबर्ड हल छिर्न पुगेका दर्शक लाइनमा लागेका थिए ।
मिडिया सेन्टर हुँदै जाने गेट बन्द थियो ।
उत्तर–पश्चिमको गेटमा लामो लाइन थियो । टिकट हातमा लिएर करिब आधा घण्टादेखि लाइनमा लागेका दर्शक सोधिरहेका थिए, ‘हामीसँग टिकट छ, गेम सुरु भइसक्यो, कतिबेला छिर्न पाउँछौं ?’
गेटमा प्रहरीले दर्शकलाई रोकिरहेको थियो ।
खेल सुरु भइसकेपछि भित्र (कबर्ड हल)बाट खबर आयो, ‘सबै सिट प्याक भइसक्यो, अब कसैलाई नछिराउनु ?’
यस्तो सुनेपछि केही दर्शक आक्रोशित भए । ठेलामठेल चल्यो । प्रहरीले केही दर्शकलाई धकेलेर पछि सार्नुपर्ने स्थिति बन्यो ।
‘कबर्ड हलको क्षमताअनुसारको टिकट बेच्नु नि, बेच्न पाइयो भन्दैमा सिटभन्दा बढी टिकट बेच्ने ? हामीलाई दुःख दिने ?,’ केही दर्शकको आक्रोश यस्तो सुनियो ।
प्रहरी जवाफ दिइरहेको थियो, ‘यो कुरा हामीलाई नभन्नुस्, राखेपका अफिसियललाई भन्नुस् ।’
राखेपका प्रतिनिधि भने मुकदर्शक बनेर बसेका देखिन्थे ।
कतिपय दर्शक बाहिरैबाट फर्किए ।
टिकट त सिट संख्याका आधारमा बेचिने हो । तर, ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्मको टिकट काटेर आएका दर्शकको सिट उनीहरु बाहिर हुँदै कसरी भरियो ?
ईसेवाका सीओओ राेशन लामिछानेले भने ईसेवाबाट ४ सय ५६ वटा टिकट बेचिएको र टिकट खरिद गर्ने कोही पनि दर्शक नफर्किएको दाबी गरे । कभर्ड हलको सिट क्षमता ५ सय चार जनाको हो । त्यसमध्ये पनि ६–७ वटा सिट रिप्ले देखाइने एलईडी राख्नका लागि हटाइएको थियो ।
‘हामीले जम्मा ४ सय ५६ वटा टिकट बेचेका हौं । टिकट किन्ने कसैले पनि बाहिर बस्नु परेन । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण केही दर्शकहरुले सुरुवाती केही सेट भने हेर्न पाउनु भएन । हामीले मिडियाको सिट बेचेका छैनौं । त्यहाँ राखेपले उपलब्ध गराएको पास हुनेहरु बस्नु भएको थियो,’ सीओओ लामिछानेले शिलापत्रसँग भने ।
लामिछानेका अनुसार एलईडीका कारण हटाइएका सिटको टिकट काट्ने दर्शकले भर्‍याङमा उभिएर खेल हेरेका थिए । आफूले चुकाएको मूल्य अनुरुपको सुविधा नपाए पनि नेपालको खेल हेर्न पाउँदा अधिकांंश दर्शकले आक्रोश सम्हाले ।
भलिबल फाइनल २ बजे हुन पूर्वनिर्धारित योजना थियो । टिकट पनि त्यहीअनुसार बिक्री गरियो । तर, साग आयोजक कमिटीले अचानक फाइनलको समय सारेर ४ बजे आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालको फुटबल सकिने र भलिबल सुरु हुनेबीच आधा घण्टा जतिको फरक थियो । फुटबलको टिकट काटेका दर्शकहरु भलिबलको टिकट नकाटी कभर्ड हल अगाडि झुम्मिएपछि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको सीओओ लामिछानेले बताए । साग आयोजक कमिटीको व्यवस्थापकीय कमजोरीले धेरै दर्शकले आधाभन्दा बढी खेल हेर्न नपाएको पनि उनले स्वीकारे ।
खेल पत्रकारहरु सामान्यतया मिडिया सेन्टरको छेउमा रहेको गेटबाट कबर्ड हलमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । तर, मंगलबार त्यो गेट बन्द थियो । राखेपका प्रतिनिधिले मान्छे छानेर घरीघरी आफ्ना आसेपासेलाई त्यो गेटबाट भित्र लगिरहेका देख्न सकिन्थ्यो ।
खेल सुरु भइसक्दासम्म खेल पत्रकारहरु मिडिया सेन्टरको छेउमा रहेको गेटमा लाइनमा थिए ।
तर, त्यो गेटबाट भित्र जान दिइएको थिएन । प्रवेश दिन आग्रह गर्दा ‘कसैलाई पनि छिर्न नदिनु भन्ने आदेश छ’ भन्दै प्रहरीले रोक्यो ।
त्यहाँ विवाद हुने स्थिति बनेपछि टिकट लिएर आएका दर्शकतिरको लाइनमा जान सूचित गरियो । पत्रकारहरु त्यतातिर लागे । भीड झन् बढ्यो । तर, प्रहरीले त्यो गेटबाट पनि भित्र जान दिएन ।
‘समाचार संकलनका लागि भनेर हामीले लिएको पासको के काम ?, हाम्रो काम रिपोर्टिङ गर्ने हो, हामीलाई नरोक्नुस्,’ पत्रकारहरु गेटमा प्रहरीसँग भन्दै थिए ।
तर, प्रहरी भनिरहेको थियो, ‘हामी यसमा केही गर्न सक्दैनौं ।’
फोटो तथा भिडियो खिच्न सहज हुने स्थानमा मिडियाको लागि स्थान छुट्याइएको हुन्छ । तर, त्यहाँ खटिएका प्रहरीहरु मिडियाको सिट पनि भरिसकेको बताउँदै भित्र जान रोकिरहेका थिए । जबकि, अधिकांश मिडियाका पत्रकारहरु बाहिरै थिए । फुटबलको समाचार कभर गरेर पत्रकारहरु भलिबल खेलको रिपोर्टिङका लागि आएका थिए ।
‘हामी सबै बाहिरै छौं, कसरी भरियो मिडियाको सिट ? कसले भर्‍यो ?,’ पत्रकारहरु सोध्दै थिए ।
मिडियाकर्मीले भित्र जान दिन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यहाँ खटिएका प्रहरीले सुनेनन् । केही समयपछि त्यहाँ प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंह आए । प्रहरीका एसपी नै आएपछि पत्रकारहरुमा विवेकशील कुरा हुने अपेक्षा थियो ।
त्यहाँ दैनिक पत्रिका, राष्ट्रिय टेलिभिजन तथा अग्रणी अनलाइनका पत्रकारहरु थिए । सबैले नम्रतापूर्वक एसपी सिंहलाई पास देखाउँदै प्रवेश दिनका लागि आग्रह गरे ।
तर, एसपी सिंहले अनपेक्षित र गैरजिम्मेवार जवाफ फर्काए, ‘यस्ता क्यामेरा बोकेर केही पनि हुँदैन । जानुस् तपाईंहरु । भित्र ठाउँ–साउँ छैन ।’
‘साग सुरु हुनुअघि भएको पत्रकार सम्मेलनमा त सागको सुरक्षा तथा व्यवस्थापन प्रहरीले चुस्त पार्छ भन्नुभएको थियो, अहिले तपाईं व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं भनेर पञ्छिन पाउनुहुन्छ ?’ पत्रकारले यस्तो प्रश्न गर्दा एसपी सिंह बोल्न सकेनन् ।
केही समयपछि ईसेवाका प्रतिनिधिले टिकट काटेका दर्शकलाई अर्को ढोकातर्फ लगे । प्रहरीसँग केही समयको चर्काचर्कीपछि पत्रकारलाई प्रवेश गर्न दिइयो । तर, सबैलाई होइन, सीमितलाई मात्र ।
भित्र प्रवेश गरेपछि देखियो वास्तवमै कभर्ड हल भरिभराउ थियो । भारत र नेपालबीचको फाइनलमा त्यति दर्शक हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ, ‘मिडियाका लागि भनेर छुट्याइएको सिट पनि ईसेवाले किन बेच्यो ?
ईसेवाले भने आफूले बेचेका ४ सय ५६ वटा टिकटका दर्शकलाई मिडियाको सिटमा नराखेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
अधिकांश पत्रकारले आफ्ना लागि छुट्याइएको भनिएको सिटमा बस्न पाएनन् र उभिएरै रिपोर्टिङ गरे । पत्रकारका लागि छुट्याइएको सिटमा गैरपत्रकार बसेका थिए ।
राखेपले पास दिँदै छिराएकाहरु धेरै भेटिए । विशिष्ट व्यक्तिलाई पास उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ ।
तर, हलको क्षमता, टिकट काटेर बस्ने सिट र समाचार सम्प्रेषण गर्न पास दिइएका मिडियाकर्मीका लागि छुट्याइएको सिटको गणना गर्न भने राखेपले बिर्सिएछ ! यो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो ।
यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । केलाउँदै जाने हो भने जारी सागको व्यवस्थापनमा थुप्रै कमजोरी देखिन्छन् ।
निकै कम तयारीका बीच साग सुरु भयो । कुनै पनि काम अन्तिम समयमा आएर गर्ने सरकारको परिपाटीले गर्दा सागमा कमजोरी देखिएको खेल विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अनौपचारिक रुपमा साग सुरु भएको एक साता भयो, औपचारिक उद्घाटन भएको दुई दिन । तर, अझै केही खेल संरचना तयार भइसकेको छैन ।
हुन पनि साग सुरु हुनुभन्दा दुई साता अघिसम्म अधिकांश खेल र अभ्यास स्थलहरू तयार भएका थिएनन् । कतिपय खेलको त खेलस्थल नै टुङ्गो लागेको थिएन । उद्घाटनस्थल दशरथ रंगशाला नै तयार भएको थिएन । पौडी प्रतियोगिताका लागि सातदोबाटोको हिटिङ पुल पनि अन्तिम समयमा आएर तयार गरिएको छ, त्यो पनि हतारहतार । कतिपय खेल सामाग्री पनि खेल सुरु हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि मात्रै ल्याइयो ।
पोखरामा त एकातिर खेल संरचना तयार गर्ने काम हुँदैछ, अर्कोतिर खेल भइरहेको छ ।
पूर्ण रुपमा मैदान तयार नै नभइ महिला फुटबल खेलाइयो । क्रिकेट मैदान पनि झारो टार्ने किसिमले बनाइएको छ । अस्थायी प्याराफिट र टेन्ट राखेर क्रिकेट मैदान तयार गरिएको छ ।
भारोत्तोलनको संरचना तत्काल तयार हुने अवस्था नै देखिँदैन ।
साग मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको प्रतियोगिता हो । यसको अर्थ साग सफल भए मुलुकको इज्जत बढ्ने र असफल भए बदनाम हुने भन्ने हो । सागको सफलता र असफलता यसको व्यवस्थापनमै निर्भर हुन्छ ।
उद्घाटन भव्य हुँदैमा मात्र सम्पूर्ण प्रतियाेगिता सफल हुँदैन । प्रतियाेगिताभर चुस्त व्यवस्थापन गरे मात्र सफल हुन्छ भन्ने कुरा राखेप र साग आयाेजक समितिले मनन गर्न आवश्यक छ ।
सरकारी पक्षले व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीलाई बेलैमा सुधार्नुपर्ने र आगामी दिनमा यस्ता खालका ठूलो प्रतियोगिता आयोजना गर्नुअघि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्नेमा खेल क्षेत्रका जानकारहरुको जोड छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १७, २०७६, १०:०७:००
निर्वान झापाली, नवराज कुँवर @shilapatra